“ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ဟာ တပ်မတော်နဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေရဲ့ ပြသာနာ၊ အစိုးရက ကြားထဲက ဖြန်ဖြေသူဆိုတာမျိုး Active Role မယူတာမျိုးဖြစ်နေပြန်ယင် ထူးထူးထွေထွေ မမျှော်လင့်ပါဘူး” - Khonumthung Media Group
You are at:Home»Headline»“ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ဟာ တပ်မတော်နဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေရဲ့ ပြသာနာ၊ အစိုးရက ကြားထဲက ဖြန်ဖြေသူဆိုတာမျိုး Active Role မယူတာမျိုးဖြစ်နေပြန်ယင် ထူးထူးထွေထွေ မမျှော်လင့်ပါဘူး”
By admin on	 November 17, 2020 Headline
ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ ဦးဆောငျတဲ့ အမြိူးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြူပျ NLD ပါတီဟာ ၂၀၁၅ ခုနှဈအထှထှေရှေေးကောကျပှဲ တုနျးကလိုပဲ ၂၀၂၀ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲမှာလညျး မဲအပွတျအသတျနဲ့အနိုငျရရှိခဲ့ပါတယျ။ ပွညျထောငျစု ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျရဲ့မဲစာရငျးရလဒျထုတျပွနျကွညောခကျြအရ NLD ပါတီဟာ အမြိူးသားနဲ့ပွညျသူ့လှတျတျောနှဈရပျ (ပွညျထောငျစုလှတျတျော) မှာ အစိုးရဖှဲ့စညျးနိုငျတဲ့ မဲအရအေတှကျထကျကြျောလှနျပွီး မဲဆန်ဒနယျ ၃၉၆ နရောမှာအနိုငျရှိခဲ့ ပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ NLD ပါတီဟာ နောကျ ၅ နှဈတာသကျတမျးအတှကျ လှတျလှတျကြှတျကြှတျနဲ့ အစိုးရဖှဲ့ခှငျ့ရရှိ သှားပါပွီ။
၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲရလဒျနဲ့ပတျသကျပွီး သဘောထားအမွငျဘယျလိုရှိပါသလဲ။ ရှတေို့းလို့မရဖွဈနတေဲ့ မွနျမာ့ငွိမျးခမျြးရေးဖွဈစဉျနဲ့ပတျသကျပွီး အသဈတကျလာမယျ့ အစိုးရအပျေါမှာ ဘာတှမြှေျောလငျ့လို့ရပါသလဲ။ ဒီကိစ်စနှငျ့ပတျသကျပွီး ခငျြးအမြိူးသားတပျဦး (CNF) ရဲ့ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဆလိုငျးထကျနီကို ဆကျသှယျမေးမွနျးထားပါတယျ။
မေး ။ ။ ၂၀၂၀ ‌ရှေးကောကျပှဲရလဒျနဲ့ပတျသကျပွီး CNF ရဲ့သဘောထားအမွငျသိခငျြပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ ခငျြးပွညျန ယျရဲ့ မဲရလဒျအပျေါ ဘယျလိုသုံးသပျခငျြပါလဲ။
ဖွေ။ ။ ခငျြးပွညျနယျ ရှေးကောကျပှဲ ရလဒျအပျေါ CNF အနနေဲ့ သဘောထားအမွငျ တရားဝငျ သုံးသပျတာမြိုးတော့ မရှိ ပါဘူး၊ ဒါပမေဲ့ ပွောလို့ရတာက ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲမှာ ခငျြးပွညျနယျအတှငျး နိုငျငံရေးပါတီ (၁၁) ခု ဝငျပွိုငျကွပွီး ဒီ ထဲမှာမှ ပွညျမပါတီ NLD နဲ့ ခငျြးအမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြူပျ CNLD က ရှအေ့ပွေးဆုံး ပါတီတှပေေါ့၊ အဲဒီမှာ NLD က အပွတျအသတျနိုငျသှားတယျ၊ အနိုငျရသှားတဲ့အကွောငျးရငျး တခြို့ကို ပွောမယျဆိုယငျ – NLD ဟာလကျရှိမှာ Ruling (အစိုးရအဖှဲ့) ပါတီဖွဈနတေော့ ငှအေား လူအားက အစ အဖကျဖကျမှာ အခွားပါတီတှထေကျ ပွငျဆငျမှု အားကောငျး တယျ၊ နောကျပွီး ၂၀၂၁ မတျလ မှာ အစိုးရ သကျတမျး ကုနျမယျဆိုတော့ ဆငျးရဲတဲ့ ခငျြး ဒသေခံ ပွညျသူတှေ ကလညျး လကျရှိ အစိုးရ NLD ရဲ့ လကျကနျြ သကျတမျးအပျေါ မြှျောလငျ့စရာတှေ ရှိနသေေးတယျ၊ ဥပမာ – အခု Tender တှေ ချေါနတော မြိုးပေါ့။ အစိုးရ ဆိုတော့ မဲဆှယျကာလမှာ ပွညျသူလူထုထံ ကတိပေးတာတှလေညျး ရှိ နနေိုငျတယျပေါ့။
မေး။ ။ ဒီနှဈရှေးကောကျပှဲဟာ ခငျြးပါတီ (CNLD) အားကောငျးလာနိုငျတယျ အနညျးဆုံးမဲဆန်ဒနယျမွထေကျဝကျ လောကျ ရနိုငျတယျဆိုပွီး ကွိုတငျသုံးသပျတာမြိူးရှိတယျ။ ဒါပမေယျ့ တကယျ့လကျတှမှေ့ာ အပွတျအသတျရှုံးသှားတယျ ဒီအပျေါမှာ ဘယျလိုမြားသုံးသပျခငျြပါသလဲ။
ဖွေ။ ။ NLD ရဲ့ အဓိက ပွိုငျဖကျ CNLD ရဲ့ အားနညျးခကျြကတြော့ ခငျြးပါတီသုံးခု ပေါငျးစညျးပွီး CNLD မှာ စုစညျးတာ တ နှဈခနျ့ပဲရှိသေးတော့ ပါတီ အငျအားတညျဆောကျမှု၊ ပါတီ ခိုငျမာမှု မရှိသေးဘူး။ ဒီတော့ ရှေးကောကျပှဲအတှကျ ပွငျ ဆငျမှုအားနညျးခဲ့တယျ။ မဲဆန်ဒရှငျတှနေဲ့ အမွဲမပွတျ ထိတှေ့ ဆကျဆံဖို့ ခငျြးပွညျနယျမှာ အခွစေိုကျသငျ့တယျ။ တဖကျမှာ ခငျြးပွညျသူတှကေလညျး ပွညျမ ပါတီကို အထငျကွီးပွီး ကိုယျ့အမြိုးသားပါတီကို ယုံကွညျအားကိုးမှု မရှိနိုငျ တာလညျး ပါတာပေါ့။
မေး။ ။၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲရလဒျအရ ၂၀၁၅ ခုနှဈတုနျးကလိုပဲ NLD ပါတီက အစိုးရပွနျလညျဖှဲ့စညျးခှငျ့ရရှိသှားပါပွီ ဆိုတော့ ငွိမျးခမျြးရေးနဲ့ ပါတျသကျပွီး ဘာတှမြှေျောလငျ့လို့ရမလဲ?
ဖွေ။ ။ ယခငျသကျတမျးတုနျးကလို ဒီ ငွိမျးခမျြးရေးဖွဈစဉျဟာ တပျမတျောနဲ့ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျတှရေဲ့ ပွသာနာ၊ အစိုးရက ကွားထဲက ဖွနျဖွသေူ ဆိုတာမြိုး Active Role မယူတာမြိုးဖွဈနပွေနျယငျ ထူးထူးထှထှေေ မမြှျောလငျ့ပါဘူး၊ သို့သျော ထိုသို့ ဖွဈမလာအောငျ နောကျဆုံး ပွုလုပျတဲ့ စတုတ်တအကွိမျ ပွညျထောငျစု ငွိမျးခမျြးရေးညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပငျလုံ အစညျးအဝေးကနေ အသဈတကျလာမညျ့ အစိုးရအနနေဲ့ ၂၀၂၀ အလှနျ အဆငျ့လိုကျ လုပျငနျးစဉျနဲ့ အဆငျ့လိုကျ အကောငျအထညျဖျောရမညျ့ လုပျငနျးတှကေို ခမြှတျပေးထားပါတယျ။ အဲဒီ လုပျငနျးစဉျကို ဘယျလောကျ အကောငျ အထညျဖျောနိုငျမလဲ ဆိုတာအပျေါမှာပဲ မူတညျမယျ။
မေး။ ။ မွနျမာ့ငွိမျးခမျြးရေးဖွဈစဉျက NLD အစိုးရလကျထကျမှာ ပိုနှောငျ့နှေးသှားတယျဆိုပွီး ပူးထကျအနနေဲ့ အရငျတဈခေါကျ အငျတာဗြူးမှာ ဖွထေားတာရှိပါတယျ။ ဒီတဈခေါကျမှာကျော ငွိမျးခမျြးရေးဖွဈစဉျက ထူးခွား မှုရှိလာနျိုငျပါ့မလား။
ဖွေ။ ။ ယခငျအစိုးရ တုနျးက ငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးစဉျ နှောငျ့နှေးတယျဆိုတာ အားလုံးအသိပါ။ အဲဒါ အစိုးရအနနေဲ့ NCA ဖွဈစဉျ၊ လုပျငနျးစဉျအပျေါ အလေးပေးမှု အားနညျးခဲ့လို့ပဲ၊ အစိုးရအနနေဲ့ NCA ဟာ တပျမတျောနဲ့ တိုငျး ရငျးသား လကျနကျကိုငျအဖှဲ့အစညျးတှရေဲ့ ပွသာနာလို့ မွငျခဲ့ကွတာလညျး ပါတယျ၊ ဒါပမေဲ့ (၄) နှဈတာ လှတျတျော သကျတမျး တခုကို ကြျောဖွတျ ခဲ့ကွပွီဆိုတော့ ယခု အစိုးရသဈ သကျတမျးမှာဆို ရှလေု့ပျငနျးစဉျတှေ ခမြှတျပွီးသားဖွဈနတေော့ ယခငျထကျ အရှပေို့ ရှိလာလိမျ့မယျလို့ မြှျောလငျ့ကွညျ့ ခငျြသေးတယျ။
မေး။ ။ ငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးစဉျရှဆေ့ကျတိုးနိုငျဖို့ အသဈတကျလာမယျ့ အစိုးရကို ဘာမြားအကွံပွုခငျြပါသလဲ။
ဖွေ။ ။ ငွိမျးခမျြးရေးဖွဈစဉျရှဆေ့ကျတိုးနိုငျဖို့ဆိုယငျ အသဈတကျလာမညျ့ အစိုးရ အနနေဲ့ NCA လမျးကွောငျးဟာ ရရှေညျ တညျတံ့တဲ့ ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးရေး ထှကျပေါကျတခုဖွဈသလို ကတြျောတို့ တိုငျးရငျးသားတှရေဲ့ နှဈပေါငျး (၇၀) ကြျောကွာ လကျနကျကိုငျတောငျးဆိုလာတဲ့ နိုငျငံရေး ဆန်ဒကို သိပွီးလညျး ဖွဈတယျ၊ ဒီတော့ ငွိမျးခမျြးရေးဖွဈစဉျ ရှေ့ ဆကျတိုးဖို့ဆိုတာ သူတို့အပျေါမှာပဲ မူတညျပါတယျ။ နောကျပွီး လုပျငနျးဖျောဆောငျတဲ့ နရောမှာ အဓိက ပါဝငျတဲ့ Peace Architecture လို့ချေါမလား၊ အဲဒီ လုပျငနျးအဖှဲ့တှကေို ပွနျလညျသုံးသပျစခေငျြတယျ။ ပွငျသငျ့တာတှေ ပွငျဆငျ ဖှဲ့စညျးပွီး Pro Active နဲ့ ထဲထဲဝငျဝငျ ပါဝငျစခေငျြတယျ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့ အမျိူးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချူပ် NLD ပါတီဟာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ တုန်းကလိုပဲ ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာလည်း မဲအပြတ်အသတ်နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့မဲစာရင်းရလဒ်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အရ NLD ပါတီဟာ အမျိူးသားနဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှစ်ရပ် (ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်)မှာ အစိုးရဖွဲ့စည်းနိုင်တဲ့ မဲအရေအတွက်ထက်ကျော်လွန်ပြီး မဲဆန္ဒနယ် ၃၉၆ နေရာမှာအနိုင်ရှိခဲ့ ပါတယ်။ ဒါကြောင့် NLD ပါတီဟာ နောက် ၅ နှစ်တာသက်တမ်းအတွက် လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်နဲ့ အစိုးရဖွဲ့ခွင့်ရရှိ သွားပါပြီ။
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သဘောထားအမြင်ဘယ်လိုရှိပါသလဲ။ ရှေ့တိုးလို့မရဖြစ်နေတဲ့ မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အသစ်တက်လာမယ့် အစိုးရအပေါ်မှာ ဘာတွေမျှော်လင့်လို့ရပါသလဲ။ ဒီကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး ချင်းအမျိူးသားတပ်ဦး(CNF) ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဆလိုင်းထက်နီကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
မေး ။ ။ ၂၀၂၀ ‌ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး CNF ရဲ့သဘောထားအမြင်သိချင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ချင်းပြည်န ယ်ရဲ့ မဲရလဒ်အပေါ် ဘယ်လိုသုံးသပ်ချင်ပါလဲ။
ဖြေ။ ။ ချင်းပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်အပေါ် CNF အနေနဲ့ သဘောထားအမြင် တရားဝင် သုံးသပ်တာမျိုးတော့ မရှိ ပါဘူး၊ ဒါပေမဲ့ ပြောလို့ရတာက ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ချင်းပြည်နယ်အတွင်း နိုင်ငံရေးပါတီ (၁၁) ခု ၀င်ပြိုင်ကြပြီး ဒီ ထဲမှာမှ ပြည်မပါတီ NLD နဲ့ ချင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချူပ် CNLD က ရှေ့အပြေးဆုံး ပါတီတွေပေါ့၊ အဲဒီမှာ NLD က အပြတ်အသတ်နိုင်သွားတယ်၊ အနိုင်ရသွားတဲ့အကြောင်းရင်း တချို့ကို ပြောမယ်ဆိုယင် – NLD ဟာလက်ရှိမှာ Ruling (အစိုးရအဖွဲ့) ပါတီဖြစ်နေတော့ ငွေအား လူအားက အစ အဖက်ဖက်မှာ အခြားပါတီတွေထက် ပြင်ဆင်မှု အားကောင်း တယ်၊ နောက်ပြီး ၂၀၂၁ မတ်လ မှာ အစိုးရ သက်တမ်း ကုန်မယ်ဆိုတော့ ဆင်းရဲတဲ့ ချင်း ဒေသခံ ပြည်သူတွေ ကလည်း လက်ရှိ အစိုးရ NLD ရဲ့ လက်ကျန် သက်တမ်းအပေါ် မျှော်လင့်စရာတွေ ရှိနေသေးတယ်၊ ဥပမာ – အခု Tender တွေ ခေါ်နေတာ မျိုးပေါ့။ အစိုးရ ဆိုတော့ မဲဆွယ်ကာလမှာ ပြည်သူလူထုထံ ကတိပေးတာတွေလည်း ရှိ နေနိုင်တယ်ပေါ့။
မေး။ ။ ဒီနှစ်ရွေးကောက်ပွဲဟာ ချင်းပါတီ (CNLD) အားကောင်းလာနိုင်တယ် အနည်းဆုံးမဲဆန္ဒနယ်မြေထက်ဝက် လောက် ရနိုင်တယ်ဆိုပြီး ကြိုတင်သုံးသပ်တာမျိူးရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ့်လက်တွေ့မှာ အပြတ်အသတ်ရှုံးသွားတယ် ဒီအပေါ်မှာ ဘယ်လိုများသုံးသပ်ချင်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ NLD ရဲ့ အဓိက ပြိုင်ဖက် CNLD ရဲ့ အားနည်းချက်ကျတော့ ချင်းပါတီသုံးခု ပေါင်းစည်းပြီး CNLD မှာ စုစည်းတာ တ နှစ်ခန့်ပဲရှိသေးတော့ ပါတီ အင်အားတည်ဆောက်မှု၊ ပါတီ ခိုင်မာမှု မရှိသေးဘူး။ ဒီတော့ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ပြင် ဆင်မှုအားနည်းခဲ့တယ်။ မဲဆန္ဒရှင်တွေနဲ့ အမြဲမပြတ် ထိတွေ့ ဆက်ဆံဖို့ ချင်းပြည်နယ်မှာ အခြေစိုက်သင့်တယ်။ တဖက်မှာ ချင်းပြည်သူတွေကလည်း ပြည်မ ပါတီကို အထင်ကြီးပြီး ကိုယ့်အမျိုးသားပါတီကို ယုံကြည်အားကိုးမှု မရှိနိုင် တာလည်း ပါတာပေါ့။
မေး။ ။၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်အရ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တုန်းကလိုပဲ NLD ပါတီက အစိုးရပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခွင့်ရရှိသွားပါပြီ ဆိုတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ဘာတွေမျှော်လင့်လို့ရမလဲ?
ဖြေ။ ။ ယခင်သက်တမ်းတုန်းကလို ဒီ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ဟာ တပ်မတော်နဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေရဲ့ ပြသာနာ၊ အစိုးရက ကြားထဲက ဖြန်ဖြေသူ ဆိုတာမျိုး Active Role မယူတာမျိုးဖြစ်နေပြန်ယင် ထူးထူးထွေထွေ မမျှော်လင့်ပါဘူး၊ သို့သော် ထိုသို့ ဖြစ်မလာအောင် နောက်ဆုံး ပြုလုပ်တဲ့ စတုတ္တအကြိမ် ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင်လုံ အစည်းအဝေးကနေ အသစ်တက်လာမည့် အစိုးရအနေနဲ့ ၂၀၂၀ အလွန် အဆင့်လိုက် လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ အဆင့်လိုက် အကောင်အထည်ဖော်ရမည့် လုပ်ငန်းတွေကို ချမှတ်ပေးထားပါတယ်။ အဲဒီ လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဘယ်လောက် အကောင် အထည်ဖော်နိုင်မလဲ ဆိုတာအပေါ်မှာပဲ မူတည်မယ်။
မေး။ ။ မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်က NLD အစိုးရလက်ထက်မှာ ပိုနှောင့်နှေးသွားတယ်ဆိုပြီး ပူးထက်အနေနဲ့ အရင်တစ်ခေါက် အင်တာဗျူးမှာ ဖြေထားတာရှိပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်မှာကော် ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်က ထူးခြား မှုရှိလာနိ်ုင်ပါ့မလား။
ဖြေ။ ။ ယခင်အစိုးရ တုန်းက ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် နှောင့်နှေးတယ်ဆိုတာ အားလုံးအသိပါ။ အဲဒါ အစိုးရအနေနဲ့ NCA ဖြစ်စဉ်၊ လုပ်ငန်းစဉ်အပေါ် အလေးပေးမှု အားနည်းခဲ့လို့ပဲ၊ အစိုးရအနေနဲ့ NCA ဟာ တပ်မတော်နဲ့ တိုင်း ရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ ပြသာနာလို့ မြင်ခဲ့ကြတာလည်း ပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ (၄) နှစ်တာ လွှတ်တော် သက်တမ်း တခုကို ကျော်ဖြတ် ခဲ့ကြပြီဆိုတော့ ယခု အစိုးရသစ် သက်တမ်းမှာဆို ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေ ချမှတ်ပြီးသားဖြစ်နေတော့ ယခင်ထက် အရွှေ့ပို ရှိလာလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ကြည့် ချင်သေးတယ်။
မေး။ ။ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ရှေ့ဆက်တိုးနိုင်ဖို့ အသစ်တက်လာမယ့် အစိုးရကို ဘာများအကြံပြုချင်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ရှေ့ဆက်တိုးနိုင်ဖို့ဆိုယင် အသစ်တက်လာမည့် အစိုးရ အနေနဲ့ NCA လမ်းကြောင်းဟာ ရေရှည် တည်တံ့တဲ့ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ထွက်ပေါက် တခုဖြစ်သလို ကျတော်တို့ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ နှစ်ပေါင်း (၇၀) ကျော်ကြာ လက်နက်ကိုင်တောင်းဆိုလာတဲ့ နိုင်ငံရေး ဆန္ဒကို သိပြီးလည်း ဖြစ်တယ်၊ ဒီတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ် ရှေ့ ဆက်တိုးဖို့ဆိုတာ သူတို့အပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်။ နောက်ပြီး လုပ်ငန်းဖော်ဆောင်တဲ့ နေရာမှာ အဓိက ပါဝင်တဲ့ Peace Architecture လို့ခေါ်မလား၊ အဲဒီ လုပ်ငန်းအဖွဲ့တွေကို ပြန်လည်သုံးသပ်စေချင်တယ်။ ပြင်သင့်တာတွေ ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းပြီး Pro Active နဲ့ ထဲထဲဝင်ဝင် ပါဝင်စေချင်တယ်။